Fitaovana Gps, Gps Mini, Smart Gps - KingSword
Tracker mitondra fiara
Tracker GPS fiara ET-01R
Fiara GPS Tracker ET-01 W
KingSword Comtech (Shenzhen) Co., ltd dia miompana indrindra amin'ny famokarana vokatra fiarovana fiara, toy ny fitaovana fanarahana GPS, boaty mainty fiara ary kojakoja mifandraika amin'izany. Manana injeniera za-draharaha izahay ary miara-miasa amin'ny mpamatsy singa elektronika tsara. Ny sehatray fampiharana dia mivelatra amin'ny fiara manohitra ny halatra hatramin'ny fitantanana logistika, fiarovana ara-bola ary fiarovana manokana.
Ankehitriny KingSword dia mivoatra toy ny fitomboan'ny indostrian'ny fiarovana, ary hanome mpanjifa vahaolana matihanina, vokatra tsara ary serivisy haingana.
Amazon dia mikasa ny hiditra amin'ny tsenan'ny fiantohana fiara sy moto
Araka ny tatitra iray avy amin'ny orinasan-tserasera sy fanadihadiana GlobalData, nikasa ny hiditra amin'ny tsenan'ny fiantohana fiara sy motera ilay andrana teknolojia Amazon. Ity vaovao ity dia miteraka fandrahonana tsy mendrika ho an'ireo orinasam-piantohana hafa izay tsy maintsy nandia taona sarotra nandritra ny areti-mandringana COVID-19. Amaz ...
KingSword tracker miaraka amin'ny fifandraisana 4G dia ho avy tsy ho ela
Rehefa ela ny fampandrosoana sy ny fanandramana, ny vokatra 4G dia ho eo amin'ny sehatry ny famokarana betsaka atsy ho atsy. Na dia kinova tsotra fotsiny aza io dia manana ny fiasan'ny ET-01 rehetra izy ary afaka manohana ny fidiran'ny herinaratra avo lenta. Ireto ambany ireto misy fampidirana fohy. ...
Rohy mifandraika: Rafitra fanaraha-maso KingSword
Address:Room A4-308, HangCheng Innovation Industrial Park, HangCheng Road, Distrikan'i Bao'an, Shenzhen, Sina
© Zon'ny mpamorona - 2020-2025: Voaaro ny zonao rehetra.